Clear fonosana, Ary mbola hanohon mazava baoritra, boaty mazava famonosana
Amin'ny maha-mpamorona fonosana foana ianao mitady inventive ho fanohanana ny fomba na ny mpanjifa 'marika, ary mba hahazoana ny vokatra nahatsikaritra teo amin'ny talantalana.
Clear boaty plastika fisehosehoana vokatra kanto, mamorona aesthetics mampientam-po, ary mampirisika ny lanjany-nanampy fomba fijery. Ary mamela anao hamorona manam-paharoa sy ny maso-misambotra ara-drafitra sy sary teti-dratsiny, maro no tsy azo atao amin'ny paperboard.
HLP Klearfold manohana aminareo hiaraka amin'i manan- tsahala endrika ara-drafitra miaraka amin'ny fahaizany sy feno loko haingana prototyping fahaiza-manao. Ary isika dia hanohana ny mpanjifa amin'ny orinasa-nitarika ny teknolojia, ary ny fahaizana ho fanohanana lehibe, ny famoahana iraisam-pirenena. Dia manolotra ny tontolo iainana-nisafidy APET, amboarina-RPET afa-po, sy ny mombamomba-PET baoritra naoty, sy ny format manan-tompo Soft Crease ® scoring teknolojia miteraka Klearfold ® mazava boaty plastika amin'ny miavaka, madio manao tsipika izay nisy diso amin'ny automated mameno andalana.
Ho fanazavana fanampiny, na ho an'ny fanohanana amin'ny endrika manaraka fandaharana, dia mifandraisa ny Creative fifandraisana Manager, Karen Werther amin'ny 718 554-3271, na karen.w@hlpklearfold.com.